मैले हारेको होइन, मोदीले जितेका हुन् नोकरी सिरिजकै दबाबका कारण नरेन्द्र मोदीजस्तो प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकारले पनि रेलवेमा लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी दिनु पर्यो । यो सिरिजका लागि कयौँ मोदी समर्थकले नै मलाई आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, पाँच वर्षमा कति पटक रोजागरीका लागि सरकारले आह्वान गर्यो ? अन्तिम वर्षमा मैले नौकरी सिरिज चलाएपछि सरकारले बाध्य भएर रोजारी दिनु परेको थियो । र, यो माग मोदी मिडियाले गरेका थिए कि रविश कुमारले ? ब्लगशनिबार, जेठ ११, २०७६
वर्षौंदेखि पर्यटकको पर्खाइमा सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समृद्धि ल्याउन पर्यटन प्रवर्धन गरी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसमा खासै चासो दिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अपी हिमाल, सुर्मासरोवर, साइपाल, कापुचुली, क्षेत्री घाजिर, धर्मगुम्फा, जेठीबहुरानी हिमाल, कालीढुंगा तला, कायाकोर हिमाललाई लक्षित गरी पर्यटकीय स्थल प्रवर्धन गर्न जरुरी देखिन्छ । ब्लगसोमबार, जेठ ६, २०७६
सडकमा समाजवाद उनले जंगिँदै भने, ‘उठाएर फ्याँकिदिनुपर्ला नि ।’ त्यसपछि ती पसले हतारिँदै कुर्सी र बेन्च जम्मा गर्न थाले । ब्लगमंगलबार, वैशाख ३१, २०७६
बेरोजगारको बयान यहाँबाट गएर देव्रेपट्टि जानोस् अनि रिसेप्सनमा गएर सोध्नुहोस्,’ गार्डले भित्र पस्ने अनुमति दिए कला / साहित्य . ब्लगशनिबार, वैशाख २८, २०७६
ब्रेकअप ‘आज के छ नेससको कार्यक्रम ?’ राजेशले सांकेतिक शब्द प्रयोग गर्यो । केटाहरुले जिस्कँदै ‘नेपाल सहवास समाज’ संस्था खोलेर ख्याति कमाउने कुरा गर्थे । यसैको सटफर्मलाई हामीले सांकेतिक बनाएका थियौं । कला / साहित्य . ब्लगशनिबार, वैशाख २८, २०७६
बजारले कज्याउने ‘सुन्दरी’ कर्पोरेट हाउस, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको प्रचार गर्न, युवतीको पहिचान गर्नु सुन्दरी प्रतियोगिताको अघोषित तर प्रमुख उदेश्य हो । एउटै स्वाद र रसका विभिन्न वस्तु फरक फरक ब्राण्डमा उत्पादन गरिएजस्तै प्रत्येक वर्ष विभिन्न मार्काका सुन्दरी उत्पादन गर्छ बजार । कला / साहित्य . ब्लगशनिबार, वैशाख २८, २०७६
नीति तथा कार्यक्रम हावादारी सपनाको थुप्रो सरकारको खर्चको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा स्रोत हुने देखिँदैन । तर, उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्ब बढी रकम चाहिन्छ । त्यो अपुग रकम कहाँबाट आउँछ कि ऋण गरेर घिउ खाने हो ? ब्लगआईतबार, वैशाख २२, २०७६
मार्क्सका चार विचार जो आज पनि सान्दर्भिक छन् आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध कृति ‘दास क्यापिटल’मा उनले आफ्ना यी विचारलाई निकै तथ्यात्मक र वैज्ञानिक पद्धतिबाट विश्लेषण गरेका छन् । मार्क्सका प्रतिष्ठित जीवनी लेखक बेलायतका फ्रान्सिस ह्वीन भन्छन्, ‘मार्क्सले त्यो सर्वग्राही पुँजीवादविरुद्ध दार्शनिक तरिकाबाट तर्क राखेका थिए, जसले पूरै मानवसभ्यतालाई गुलाम बनाएको थियो ।’ ब्लगआईतबार, वैशाख २२, २०७६
सधैं आर्थिक संकटमा रहे अर्थतन्त्रका महाज्ञानी पुँजीवादविरोधी विचारधारका कारण मार्क्सको जीवन सहज भएन । उनलाई कयौं देशले देश निकाला गरे । जसका कारण उनी लन्डनमा शरणार्थीका रूपमा बस्न बाध्य भए । जीवनको अन्तिम समयमा मार्क्ससँग कुनै पनि देशको नागरिकता थिएन । ब्लगआईतबार, वैशाख २२, २०७६
अलि कम माया गर्न मिल्दैन आमा ? तपाईंले ‘मलाई नै जन्माउँछु’ भनेर जन्माउने कर्म गर्नु भएको नहुन सक्छ । जो जन्मे पनि, जस्तो जन्मे पनि छोराछोरीका रुपमा स्वीकार्ने तपाईंको विशाल छाती थियो, छ । ब्लगशनिबार, वैशाख २१, २०७६
के हामीसँग प्रश्न सकिएकै हुन् ? बौद्धिक, बुद्धिजीवी र मिडिया बारम्बार आफ्नो ज्ञान अनि पहुँचको आधारमा सत्ताले सिर्जना गरेको भ्रमले मलाई वशीभुत पार्दा रहेछन् । ब्लगशनिबार, वैशाख २१, २०७६
शान्त मुस्ताङ ! जहाँ मान्छे मार्ने अपराध हुँदैन १४ वटा मुद्दा बोकेर बसेको मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी एउटा पनि मुद्दा छैनन् । तर, जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका विवाद भने निकै भयावह छ समाचार . ब्लगबिहिबार, वैशाख १९, २०७६
औंलामा नाचिरहेको चीन यसै क्रममा मैले चीनका दुई प्रख्यात कम्पनीहरुको अवलोकन गर्ने मौका पाएँ । हुवावे र टेसेन्ट, यीमध्ये हुवावे त हामीले सुनेकै नाम हो । टेन्सेन्ट, सन् १९९८ मा स्थापना गरिएको यो कम्पनीको प्रकृति सूचना प्रविधिको हो । ब्लगबुधबार, वैशाख १८, २०७६
विवेकशील पार्टी कि म्यारिज ब्युरो ? मलाई राजनीतिबारे त्यति चासो छैन । सामाजिक काममा विवेकशीलको सक्रियता मनपर्छ, त्यसैले हरेक कार्यक्रममा जान्छु । यही क्रममा सविन (विवेकशीलका एक सक्रिय कार्यकर्ता)सँग भेट भयो । भेट बाक्लियो । प्रेम भयो । अहिले ब्रेकअप भयो, म कार्यक्रममा पनि जान्नँ, कार्यालय पनि जान्नँ ।’ समाचार . ब्लगशनिबार, वैशाख १४, २०७६
किराँत सभ्यता, छुवाछुत कू प्रथा, सलहेश फूल नयाँ वर्ष भन्ने वित्तिकै मिथिलाबासीको मन फुलवारीमा अड्किन्छ । फुलवारीको मध्यभागमा रहेको मालिन मन्दिर दक्षिण टाँस्सिएको हारमको रुखको मध्यभागमा फुल्ने माला आकारको फूललाई सलहेशको गाथासँग जोडिन्छ । समाचार . ब्लगआईतबार, वैशाख १, २०७६
किन चाहियाे ‘क्रान्ति र प्रतिबन्ध ’ आफ्नै भोगाइ र अनुभवलाई बेवास्ता गरेर सत्तारुढ दलले विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवाले स्वागत गरे । आफ्नै अनुभव र भोगाइविपरीत जान कुन तथ्य र सत्यले हौस्यायो ? समाचार . ब्लगआईतबार, चैत २४, २०७५
डिभी र अमेरिकाले दिएकाे दुःख ‘कहाँ जाने के गर्ने ? कसरी बाँच्ने ? कसरी भाडा तिर्ने ? के खाने अनि कलिला बच्चीलाई के ख्वाएर पाल्ने ? म ति दिन कसरी भन्न सक्छु र भाई ?’ उसै त अध्यारो अनुहार लगाईरहेका दाईको आँखामा टिलपिल आशु आईसकेका थिए । ब्लगशनिबार, चैत २३, २०७५